SomaliaReport: Al-Shabaab oo Laga Saaray Muqdisho
By ABDI ABTIDOON 01/20/2012
Dagaal culus oo udhexeeya ciidamada Dawlada Ku Meel Gaarka Soomaaliya (DKMG) iyo nabadsugayaasha Midowga Africa iyo cakdoonka al-Shabaab ayaa ka dhacay qaybo badan Muqdisho subaxnimadii hore ee Jimcaha, taaso sababtay in caasimada laga qabsado kooxda fallaagada ah. Dagaalku wuxuu ahaa kii ugu xoog badnaa intii al-Shabaab ka baxday Muqdisho Agosto 6, 2011. Gaadiidka hubeysan iyo taangiyada AMISOM ayaa lagu arkayey goobaha cusub ee Muqdisho Jimcihii, sida xaafadaha aadka loogu dagaalay ee Dayniile iyo Suuqa Xoolaha ee Heliwaa.
Degmooyinkan aagaga Muqdisho oo ah goobihii ugu danbeeyey ee al-Shabaab gacanta ku haysay.
"Waxaan dagaal abuubulan ku qaadnay dhowr goobood oo ay haysteen xagjirayaashu, waxaana ku khasabnay inay cararaan. Waxaan ku dabajirnaa, waxaana xaqiijinaynaa inaan gaaray degmada Dayniile iyo Suuqa Xoolaha oo ay ku xooganaayeen," Korneelka DKMG Cabdullaahi Cali Caanoos ayaa Somalia Report usheegay.
Maxamed Calu Nuur oo degan degmada Heliwaa ayaa Somalia Report inay madaafiicda iyo xabado wiifaya dileen saddex qof oo rayid ah iyo labo kalena lagu dhaawacay degmada, kuwaasoo oo aan isbitaal loo qaadin dagaalka culus dartiis oo dadku guryaha ku xayimeen.
Ciidamada DKMG iyo AMISOM oo gaaray wadada halbowlaha ah Basra ee ku xiranta Afgooye, oo ku taal 25 kiilomitir galbeedka Muqdisho.
Khasaaraha soo gaaray labada dhinac ee degaalamaya wali lama soo xaqiijin, al-Shaab na weli faalo kama soo saarin dagaalka.
Kasaarida al-Shabaab ee Muqdisho waxay kusoo hagaagtay xilli ururka Islaamiga ah ee al-Shabaab xuduudo badan laga qabsaday sida Beletwyne iyo gobolada Jubada Hoose iyo Gedo.
Somalia Report waxay soo gudbinaysaa isbedelka soo kordha.